शेखर र गगनको प्रश्न- फेरि महाधिवेशन सार्न खोजेको हो? :: Setopati
शेखर र गगनको प्रश्न- फेरि महाधिवेशन सार्न खोजेको हो? महत र शर्मा भन्छन्- सर्दैन
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, असोज ८
शेखर कोइराला र गगन थापा। फाइल तस्बिर।
नेपाली कांग्रेसमा फेरि पनि १४ औं महाधिवेशनको मितिबारे बहस चलेको छ।
देशका छ हजार सात सय ४३ वडामा भदौ १८ मा एकै दिन अधिवेशन गर्ने भने पनि दुई-तीन चरणमा पनि वडा अधिवेशन सकिएका छैनन्।
यतिमात्र होइन, प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लासहित विभिन्न १३ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद कायमै छ।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र केन्द्रीय सदस्यद्वय मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखकले पटकपटक विवाद समाधान गरे पनि नयाँ-नयाँ विवाद देखा परेका छन्।
क्रियाशील सदस्यतामा देखा परेका अनेक विवाद निरूपण नगरी कांग्रेसले गाउँ/नगर अधिवेशन गर्न अनुमति दिइसकेको छ।
वडा अधिवेशन सकेका ६४ जिल्लामा शनिबार गाउँ/नगर अधिवेशन हुनेछ। यीमध्ये २१ हिमाली जिल्लामा कांग्रेसले असोज १८ भित्रै जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
१३ जिल्लामा क्रियाशील विवाद त्यसै छाडेर कांग्रेसले अन्यत्र भने गाउँ/नगर र प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा हुँदै जिल्ला अधिवेशनसम्म गर्न सक्ने गरी अनुमति दिइरहेको छ।
कांग्रेसले १३ जिल्लामा देखिएका क्रियाशील विवाद छिट्टै समाधान गर्ने भने पनि यी क्षेत्रमा कहिले वडा अधिवेशन हुन्छ भन्ने मिति यकिन गरेको छैन। बरू मिति तय गर्न निर्वाचन समितिलाई नै भनेको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले क्रियाशील सदस्यताको सूची निर्वाचन समितिलाई नदिँदा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। कतिपय जिल्लाका विवाद मिले पनि ती जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको सूची पार्टी वेबसाइटमा राखिएका छैनन्।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा सर्लाहीका नेता/कार्यकर्ता दुई महिनादेखि धर्नामा छन्। नेपाल दलित संघलगायतले पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि सुनिश्चित हुनुपर्ने र जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्न नहुने माग गर्दै धर्ना दिइरहेका छन्।
जनसंख्या कम भएका समुदायबाट पनि न्युनतम प्रतिनिधित्व हुने गरी महाधिवेशन प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्नेबारे कांग्रेसले छलफल गरे पनि निर्णय भने गरिसकेको छैन। यसका लागि केहीदिनमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तयारी छ।
पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार १४ औं महाधिवेशनका कामकारबाही नभएपछि कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि देखा परेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतले एकैपटक सबै जिल्लाका अधिवेशन हुनुपर्नेलगायत मागहरू राखेका छन्।
साथै सभापति देउवाको गृहजिल्लामा गरिएको वडा अधिवेशन पनि विवादमा परेको छ। भदौ २५ मा जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ललगायतको सहमति वेगर नै सभापति देउवा पक्षले एकलौटी हिसावले अधिवेशन गरेको आरोप छ।
अवैध ढंगले गरेका अधिवेशन खारेज गरी नयाँ अधिवेशन मिति तय गर्न तथा क्रियाशील सदस्यताको सूची पनि तलबाट सिफारिस गरेअनुसार नै फेरि जारी गर्न माग गर्दै डडेल्धुरा पार्टी कार्यालयमा बिहीबारदेखि रिले अनसन जारी छ।
कांग्रेसभित्र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना भइरहेका छन्। केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले पार्टी इतिहासमै पहिलोपटक प्रहरी प्रशासन लगाएर डडेल्धुरामा वडा अधिवेशन गरिएको बताएका छन्।
साथै कोइरालाले कांग्रेसमा हिमाली जिल्लामा पहिले र बाँकीमा पछि जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय भएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन्।
‘कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक भएर वडा अधिवेशन सकेका हिमाली जिल्लामा पहिले र बाँकीमा पछि अधिवेशन गर्नु पर्नाको कारण के हो? सँगैको जिल्लामा गर्ने छिमेकी जिल्लामा नगर्ने भन्ने पनि हुन्छ?,’ कोइरालाले भने, ‘अर्कोतर्फ पदाधिकारी बैठकमा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयले प्रवेश पायो भन्ने सुन्नमा आएको छ। महाधिवेशनको मिति सार्ने अधिकार पदाधिकारीहरुलाई कसले दियो?’
कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार र शुक्रबार कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठक बसेको थियो। यो बैठकले हिमाली जिल्लामा दसैँअगाडि नै जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। चिसो बढ्ने र हिउँ पर्ने भएकोले असोज १८ मै हिमाली जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको छ।
कांग्रेस विधानले पदाधिकारीलाई चिन्दैन। केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपरे केन्द्रीय समिति बैठकबाट गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ। पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकका नाममा धेरैपटक बैठक भए पनि खासै सहमति नभएकोमा कोइरालाले आलोचना गरिरहेका छन्।
‘पदाधिकारीहरुले कांग्रेसलाई कहाँ पुर्‍याउन खोजेको? कतै पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुले नै महाधिवेशन नचाहेको त होइन? आशंका पैदा भएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘यो निर्णय सच्चिनु जरुरी छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद भनिएका १३ जिल्लाको समस्या किन समाधान भएन र अधिवेशन प्रक्रिया किन शुरु हुन सकेन? क्रियाशील सदस्यतामा अझै कति धाँधली गर्ने? यसको जवाफ चाहियो।’
कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशन मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा गर्ने भनेको छ। तर महाधिवेशनअगाडि हुनुपर्ने तल्ला तहका अधिवेशन केन्द्रीय समितिले बनाएको कार्यतालिका अनुसार अगाडि बढेको छैन। यसले महाधिवेशन नै प्रभावित हुन्छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
मंसिरमा महाधिवेशन हुँदैन कि भन्ने आशंका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाको पनि छ।
‘कति सजिलै सर्छ अधिवेशनको मिति?,’ थापाले भने, ‘१३ जिल्लाको वडा अधिवेशनकै टुंगो छैन। कहिल्यै विधिमा चल्नु नपर्ने, थितिमा बस्नु नपर्ने, वेथितिको जिम्मा लिनै नपर्ने?’
उनले विधिविधानअनुसार नै पार्टी चल्नुपर्ने भए पनि नेताको आदेशले चल्ने गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
‘नेताले आदेश दिए पुग्ने? कार्यकर्ता आदेश कुरेर बस्नुपर्ने? अब नि यस्तो बेहालमा पार्टी चलाइरहने कि बदल्ने? सोचौं,’ थापाले भनेका छन्।
केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिरमा सम्भव हुँदैन कि भन्ने विषय पदाधिकारी बैठकमा उठेको थियो।
केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिरबाट सार्नेबारे अहिले छलफल नभएको सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए।
‘अहिले जिल्ला अधिवेशनसम्म गर्नेबारे छलफल भएको छ। हिमाली २१ जिल्लामा दसैंअगाडि नै जिल्ला अधिवेशन गरौं भन्नेमा समझदारी बनेको छ,’ महतले भने, ‘वडा अधिवेशन नभएका १३ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंग्याएर छिट्टै वडा अधिवेशन गर्ने पनि कुरा भएको छ।’ हिमाली भेगमा चिसो बढ्ने भएकोले दसैंअगाडि नै जिल्ला अधिवेशन गर्नु परेको महतले बताए।
पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि केन्द्रीय महाधिवेशन सार्नेबारे कुनै पनि छलफल नभएको बताएका छन्।
‘प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनबीच डेढ महिना समय राखेकोले केन्द्रीय महाधिवेशन सर्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै ठाउँमा वडा अधिवेशन सकेर पालिका अधिवेशन हुन गइरहेको तर कुनैमा भने वडा अधिवेशन नै नभएकोले कुनै तहको निर्वाचनमा पुगेर देशैभर एकैपटक अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्नेछ।’
उनले ३३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको एकैपटक अधिवेशन गर्नेबारे कुराकानी भएको पनि बताए। तर हिमाली जिल्लामा भने चिसो बढ्ने र हिउँ पर्ने सम्भावना रहेकोले दसैंअगाडि नै जिल्ला अधिवेशन गर्ने सहमति भएको शर्माले बताए।
‘हिउँ पर्ने सम्भावना र भौगोलिक परिस्थिति हेरेर हिमाली जिल्लामा दसैअघि नै जिल्ला अधिवेशन गर्ने भनिएको हो,’ उनले भने, ‘तल्ला तहमा एकैपटक अधिवेशन नभएकोले केन्द्रीय महाधिवेशन सर्छ कि भन्ने आशंका छ त्यसो हुँदैन। महाधिवेशन सार्नेबारे छलफल नै भएको छैन। आवश्यकता देखिए केन्द्रीय समिति बैठक बसेर छलफल गर्छ।’
कांग्रेसमा पाँच पटकसम्म केन्द्रीय समितिले बनाएको महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ८, २०७८, १७:३१:००